Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Dalxiisayaasha Hindiya ayaa lagu wadaa in si weyn loo raadiyo
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • saaciday inay • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Hindiya • Wararka Raaxada • Shirarka • News • Dadka • Safarka Tareenka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Shopping • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Dalxiisayaasha Hindiya ayaa lagu wadaa in si weyn loo raadiyo.
Kobaca dhaqaalaha Hindiya ayaa si toos ah uga qayb qaadan doona kor u kaca dadka dabaqadda dhexe, taasoo keentay in hantida korodho iyo dakhliga la iska tuuro sanadaha soo socda.
Horumarinta dalxiisku caadi ahaan waxay ku horumartaa dhaqaalaha soo koraya, mustaqbalka Indiana wuxuu u muuqdaa mid dhalaalaya.
Horumarinta kaabayaasha ee Hindiya iyo horumarinta suuqa diyaaradeed ee jaban waxay la macno tahay safarka dibadda ah waa mid la awoodi karo oo la heli karo.
56% dadka Hindida ah waxay yiraahdeen 'wax la awoodi karo' iyo 'helitaanka' waxay ahaayeen tixgelinno muhiim ah marka ay iibsanayaan fasax.
Dalxiisayaal Hindi ah waxay noqon doontaa qaar ka mid ah dadka safarka ah ee aadka loo jecel yahay, marka loo eego dhaqaalaha sii kordhaya ee Hindiya, dadka da'da yar iyo kor u kaca dabaqadda dhexe, sida ay qabaan falanqeeyayaasha warshadaha safarka. Khubaradu waxay xuseen in dalka la saadaalinayo inuu gaaro heerar rikoor ah oo ah 29 milyan oo safar dibadda ah marka la gaaro 2025 - aragti xamaasad leh marka loo eego noocyada COVID-19.
Kahor masiibada, Hindiya waxay ahayd mid ka mid ah suuqyada ilaha dalxiiska ee ugu muhiimsan oo la raadsado, waxayna bartilmaameed muhiim ah u ahayd ciyaartoy waaweyn sida. BooqoBritain iyo Dalxiiska Australia.
Iyadoo dhibaatada COVID-19 ay culeys weyn saartay dhaqaalaha dalka iyo warshadaha dalxiiska, Socotada Hindida waxaa la filayaa inay diyaar u noqdaan inay mar kale safraan.
Dhaqaalaha Hindiya wuxuu sii wadi doonaa inuu ku sii dhiso guusheeda, ka dib markii bilowga ah ee 2020. Saadaasha hadda waxay muujineysaa in GDP qaranka Hindiya uu gaari doono $ 4 trillion, 50% ka sarreeya heerarka 2021, marka loo eego xogta ugu dambeysay.
Horumarinta dalxiisku caadi ahaan waxay ku horumartaa dhaqaalaha soo koraya, mustaqbalka Hindiyana wuxuu u muuqdaa mid ifaya - haddii la bixiyo waxay ka fogaan kartaa dillaaca COVID-19 dheeraad ah iyo qufulyada xiga. Waxay fursad aad u fiican u siinaysaa suuq-geeyayaasha, kuwaas oo ka faa'iidaysan kara dadka sii kordhaya ee dalka, oo ka kooban Gen Z iyo kun-sano (qiyaastii 51%). Jiilashani waxay u janjeeraan inay safraan. Intaa waxaa dheer, horumarinta kaabayaasha ee Hindiya iyo horumarinta suuqa diyaaradeed ee jaban waxay ka dhigan tahay safarka dibadda waa mid la awoodi karo oo la heli karo.
Marka loo eego sahan dhowaan la sameeyay, 56% dadka Hindida ah waxay yiraahdeen 'wax la awoodi karo' iyo 'helitaanka' ayaa ahaa tixgalin muhiim ah marka la iibsanayo fasax. Tani waxay hoosta ka xariiqday in fudud, xalal safar oo kharash-ku-ool ah ay yihiin waddadii hore.
Maalgelinta India ee korodhay ee shirkadaha diyaaradaha ee miisaaniyada, iyo sidoo kale hagaajinta kaabayaasha garoonka, waxay la macno tahay isku xirka garoomada diyaaradaha ee gobolka iyo kuwa waaweyn. Sidaa darteed, safarka caalamiga ah wuxuu noqon doonaa mid toos ah oo ka jaban Socotada Hindida. Tani waxay lama huraan u noqon doontaa guusha India ee waayihii faafitaanka kadib.
Durba, miisaaniyada Hindiya warshadaha duulimaadyada ayaa si aad ah u kordhay tobankii sano ee la soo dhaafay iyada oo ay weheliso dhaqaalaheeda. Sannadkii 2016, waxay dhaaftay adeegayaasha buuxa tirada kuraasta rakaabka ee la iibiyay, waxayna ka dhigan tahay 51% dhammaan taraafikada rakaabka Hindiya illaa 2021.